Banyere Anyị - Guangzhou Maishengli Technology Co., Ltd.
Guangzhou Maishengli Technology Co., Ltd. bụ a na nkà na ụzụ na nkà na ụzụ enterprise, pụrụ iche na imewe, R & D, mmepụta na ahịa nke UV flatbed na-ebi akwụkwọ (kpọmkwem emeputa). Anyị na-achịkọta Elites nke UV Industry na UV Flatbed Printer usoro, gụnyere Flat na gburugburu igwe igwe 9060, 1613, 2513, 3220, ọtụtụ ụdị mbipụta akara na usoro nhazi atụmatụ.
Mbipụta anyị na-enye mmetụta siri ike nke mmetụ na mmetụta 3 Dimensional. Mbipụta ahụ na-adịgide adịgide, na-eguzogide ọkọlọtọ, na-enweghị mmiri, ìhè anyanwụ na-egbu maramara, na agba agaghị ada. Enwere ike itinye ihe ọ bụla n'ime 0.1mm-100mm na ngwa nbipute ma bipụta ya. Mserin UV na-ebi akwụkwọ bụ nhọrọ mbụ maka obibi akwụkwọ, nhazi ahaziri iche, mma ụlọ na mgbasa ozi, wdg.
Dị ka ahịa chọrọ, anyị otu nwere keukwu na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ na UV-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ .Breaking ọhụrụ, na-enye ngwá selections maka onye entrepreneur nke ulo oru n'ichepụta na nhazi a zuru tent nke oru ọzụzụ ngwọta.
A na-ere ngwaahịa anyị n'ofe ụwa gụnyere Israel, Malaysia, Poland, Slovakia, Romania, India, Thailand, Singapore na Indonesia, wdg. Anyị ga-achọ ịkpọ gị ka ị bụrụ onye na-ekesa anyị ma kesaa ọganiihu anyị. Anyị na-enye ndị mmekọ anyị ihe ngwọta kacha mma iji mezuo mkpa ha na azụmaahịa nbipụta dijitalụ.
Na 8 + afọ nke mmepụta na ahụmịhe R&D, ndị na-ebi akwụkwọ Mserin UV nwere arụmọrụ kwụsie ike karị.
Jikere ibipụta, na ọnụ ala. Enwere ike ijikọ ya na ọtụtụ mmepụta iji kwado ụdị faịlụ dị iche iche.
Otu-mpempe akwụkwọ, nnukwu-ọnụ ọgụgụ kenha template obibi. Obere iwu ka enwere ike ijide.
Enweghị mkpa ịme efere, nweta otu mbipụta, belata ọnụahịa mmepụta. Ikpuchita otutu ubi dika ihe eji ewu ulo, icho mma nke ulo, mgbasa ozi, oru aka, ihe egwuru egwu, akpukpo aru, wdg.
Iji bụrụ ndị pụtara ìhè karịa ndị asọmpi ahụ, anyị na Ricoh nwere mmekọrịta ogologo oge. Na uru nke ezi ink ụmụ irighiri mmiri na elu na-eyi ndị na-eguzogide, anyị na-ukwuu appraised na ghọtara site ahịa, na ijikọta elu-nkenke nozzles na ngwa ndị ọzọ. Ihe osise mara mma karịa, nkenke dị elu, na agba dị mma karịa.
Na-arụ ọrụ na ngwanrọ njikwa njikwa America maka ọtụtụ nbipu, jikọọ na Photoshop, Coreldraw, Ai na sọftụwia ndị ọzọ, kwado JPG, PNG, EPS, TIF na ụdị onyonyo ndị ọzọ; kwado akpaka ụdị, ogbe nhazi, pụrụ iche The agba-kenha ọrụ na-eme ka foto mara mma, na elu nkenke na ihe yi na agba.